တုန်လှုပ် စေသော e-commerce GMV သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃. ၂ ဆတိုး ခဲ့သည် – Pandaily
တုန်လှုပ် စေသော e-commerce GMV သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃. ၂ ဆတိုး ခဲ့သည်
May 31, 2022, 23:11ညနေ 2022/06/01 14:15:52 Pandaily
Shanyin e-commerce ဂေဟ ဗေဒ ညီလာခံ ၏ဒုတိယ နေ့တွင် Shanyin e-commerce ဥက္က president ္ဌ Wei Wenwen က ကြေငြာ ခဲ့သည်ပလက် ဖော င်း၏ GMV သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တစ်နှစ်လျှင် ၃. ၂ ဆတိုး ခဲ့သည်ထုတ်ကုန် ၁၀ ဘီလီယံကျော် ရောင်းချခဲ့သည်။ ဤ တိုးတက်မှုနှုန်း က “ e-commerce ကို စိတ် ၀ င်စား ခြင်း” သည်ကြီးမားသော စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု သော်လည်း ပလက်ဖောင်း သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အစောပိုင်း အဆင့်တွင် ရှိနေသေး သည်။ Wei က အနာဂတ်တွင် ကြီးမားသော အခွင့်အလမ်း များစွာ ရှိနေသေး ပြီး နယ်ပယ် သစ် များ၏ အချိုးသည် ၅၀% ကျော် အထိရောက်ရှိ လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုန်သည် အသစ် ၁. ၈ သန်း၊ အရောင်း ဝန်ထမ်း ၃. ၈၆ သန်း၊ MCN အေဂျင်စီ များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူ ၂၀၀၀၀ ကျော်သည် တုန်လှုပ် နေသော e-commerce မှတစ်ဆင့် အလုပ် လုပ်ရန် ရွေးချယ် ခဲ့ကြပြီး မယုံ နိုင် လောက်အောင် ကြီးထွား လာခဲ့သည်။ “ လူတိုင်း အတွက် ကောင်းမွန်သော စာအုပ် အစီအစဉ်” သည် ပလက်ဖောင်း စာအုပ် ရောင်း အားကို အမှာစာ သန်း ၁၉၀ ကျော် အောင် ကူညီ ပေးခဲ့ပြီး “ Finding Craft Program” သည် အမွေအနှစ် မဟုတ်သော လက်မှုပညာ အမွေဆက်ခံ သူများ ၏စုစုပေါင်း လည်ပတ် ငွေကြေး ကို တစ်နှစ်လျှင် ၁၅ ဆ တိုးမြှင့် ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် “ Mountain Mountain Headline Program” သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ဒေသခံ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် ၁. ၇ ၉၃ သန်းကို ရောင်းချ ရန်ကူညီ ပေးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Yanyin e-commerce သည် “ အကျိုးစီးပွား e-commerce” ဟူသော အယူအဆကို သုံးစွဲ သူများ၏ လျှို့ဝှက် လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန်နှင့် ဘဝ အရည်အသွေး တိုးတက်စေ ရန်ရည်ရွယ် သည့် e-commerce အမျိုးအစား တစ်ခု အဖြစ်သတ်မှတ် ခဲ့သည်။ Wei Wenwen က e-commerce ကို စိတ် ၀ င်စား ခြင်း၏ တန်ဖိုးသည် ကုန် ပစ္စည်းများကို စားသုံး သူများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အကြောင်းအရာ များ နှင့်ချိတ်ဆက် ရန် ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ကွန်ဖရင့် ၌ Wei Wenwen က ပလက် ဖော င်းသည် “ e-commerce အကျိုးစီးပွား” ကို “ အားလုံးပါ ၀ င်သော e-commerce အကျိုးစီးပွား” သို့ အဆင့်မြှင့်တင် မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲ သူများ၏ မတူကွဲပြားသော လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် အခြေအနေများနှင့် စျေးဝယ် ခြင်း လိုအပ်ချက် များကိုပိုမို ဖြည့်ဆည်း ပေး လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဗီဒီယို အတို များ၊ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် အကြောင်းအရာ များ၊ Bounyin Mall ၊ ရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ကို ညှိနှိုင်း ပါ။ Bounyin Electronic Company သည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အသစ်ကို ဆောင်ကြဉ်း ရန်ရည်ရွယ်သည်။
“ Pan-fun e-commerce” ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဗီဒီယို တိုတို နှင့်တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်းကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့် အကြောင်းအရာ များသည် သုံးစွဲ သူများ၏ စိတ် ၀ င် စားမှု ကိုလှုံ့ဆော် ပေးပြီး သူတို့အတွက် အသစ် သောအရာ များ အကြံပြုသည်။ Shouyin အကောင့် နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော စျေးဝယ် စာရင်း ရှိပြီးသား အသုံးပြုသူများသည် Shouyin Mall တွင် ရှာဖွေ ခြင်းဖြင့် အမှာစာ များ ကိုတိုက်ရိုက် မှာယူ နိုင်သည်။ သို့မှသာ ပလက်ဖောင်း ကို သူတို့ စိတ်ဝင်စား သော ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ကမ်းလှမ်း ချက် များကိုဖော်ထုတ် နိုင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်း မှု များမှတစ်ဆင့် အသွားအလာ ကိုတိုးချဲ့ မည် ဖြစ်သောကြောင့် ဤ ဒေသ များသည် သုံးစွဲ သူများအား “ တစ်နေရာ တည်း” စျေးဝယ် ခြင်း အတွေ့အကြုံကို ပေးလိမ့်မည်။
Tencent နှင့် Shuttle Development အတွက် အကြံပြု ထားသော နည်းဗျူဟာ အသစ်
Tencent"Penguin Exchange Buy" ဟုခေါ်သော အကြံပြု ထားသော စီမံကိန်း အသစ်ကို တိတ်တဆိတ် စမ်းသပ် နေသည်။ Bytedoute တိုတောင်းသော ဗီဒီယို အက် ပလီကေးရှင်း သည် အကြံပြု ထားသော အင်္ဂါရပ် အသစ်ကို ထပ်မံ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။